सरकारको बुद्धिले मुलुकमा निकट भविष्यमै भीषण राजनीतिक द्वन्द्वः धमला, नेकपा नेता::mirmireonline.com
कृष्णप्रसाद धमला अर्थात गम्भीर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् उनी । गम्भीर संखुवा जिल्ला प्रहरीमा आगजनीको अभियोगमा हिरासतमा छन् । उनलाई पार्टी कामको सिलसिलामा उपत्यका आउँदै गर्दा ‘विशेष सुराकी’को आधारमा अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’सँगै काठमाडौंको नागढुंगाबाट सादा पोशाकमा खटिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को एक टोलीले दिउँसो ३ बजे गिरफ्तार गर्यो ।
झण्डै ३२ घण्टासम्म अवस्था अज्ञात राखी भोलिपल्ट ११ गते राति मात्र अभियोग रहेको भनिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल पुरयाइयो । अनुसन्धानका लागि भन्दै ३९ दिन हिरासतमा राखियो । त्यहाँ दुवैजनामाथि नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित एक क्रसर उद्योगमा आगो लगाएर ‘संगठित अपराध’ अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । पछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथिको बहसपछि काभ्रेको अभियोगबाट सफाई पाए । रिहा पनि भए । तर रिहा भएर सर्वोच्चपरिसर नछाड्दै प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरी नुवाकोटमा पुर्याएर आगजनीको अभियोगमा थुनामा राखियो । त्यस अभियोगबाट पनि सर्वोच्चबाट निर्दोष ठहर भई रिहा भए । फेरि गिरफ्तार गरी दाङ पुर्याइयो र त्यहाँ ‘विष्फोटक पदार्थ’ र ‘कर्तव्य ज्यान’ सम्बन्धी मुद्दा चलायो । त्यो गम्भीर अभियोग थियो । जुन अभियोग गत वर्ष चुनावी सभानजिक भएको ‘बम विष्फोट’मा परी एक म्यादी प्रहरीको ज्यान गएको घटनासँग जोडिएको थियो ।
त्यस मुद्दामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहसपछि सर्वोच्चबाट दुवै जना नेता उनीहरुमाथिको अभियोग आधारहीन र अप्रमाणित ठहर गर्दै असोज ५ गते थुनामुक्त गर्न आदेश भयो । रिहा पनि भए । रिहाभएलगत्तै सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी ‘बम विष्फोट’को अभियोगमा संखुवासभा प्रहरी हिरासतमा राख्दै आएको छ । त्यहाँ पनि आगजनी र विष्फोट गराएर ‘संगठित अपराध’ गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । त्यसमा पनि धमलापुत्र चेतन शर्मा नेताद्वयलाई गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको भन्दै रिहाईको माग राखेर पछिल्लो चौथोपटक असोज ९ गते दायर गरेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथिको बहसपछिको सर्वोच्चको आदेशमा कार्की र धमलालाई बाटोको म्यादबाहेक ७२ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित बन्दीलाई उपस्थित गराउन भनियो । यसैबीच राजनीतिक बन्दी नेता धमलासँग क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग हिरासत अवधिमा भएको भेटमा भएको कुराकानीका मुख्य अंशः –सं.
तपाईलाई कहाँबाट, कुन समय र कस्तो अवस्थामा गिरफ्तार गरियो ?
त्यहाँबाट कहाँ लगियो ?
त्यहाँबाट के भयो बताइदिनुस् न ?
त्यसमा तपाईको जवाफ के रह्यो त ?
दिनभरि त्यही राखियो । त्यसपछि साँझ रातपरेपछि गाडी चढाएर त्यहाँबाट हिँडाइयो । कहाँ लैजाने भनेर सोध्दा केही बोल्दैनथे । चालकले ‘हामी पेप्सीबाट निस्कने कि अन्तैबाट ?’ भन्ने सुनेपछि पेप्सीकोलातिरबाट लैजान खोज्या रहेछन् भन्ने अन्मान लगायौं । हत्कडी र कालो पट्टी त छँदै थियो । एक घण्टाजति गाडी बढेपछि ‘यतै यतै’ भने । गाडी रोके । त्यसपछि दुवै जनाको आँखाबाट पट्टी खोलिदिए । त्यो कोटेश्वर तीनकुनेनेर आइपुगेर हो । पट्टी हामीलाई अगाडि फर्कन लगाई पछाडिबाट खोले र पछाडि फर्कन दिएनन् । त्यसैले मान्छे चिन्न सकेनौं । अगाडितर्फ हेर्दा प्रहरी चौकी तीनकुने लेखिएको साइनबोर्ड देखेँ । अब चाहिं कोटेश्वर तीनकुने प्रहरीमा ल्याइपुर्याएरहेछन् भन्ने थाहा भो । त्यहाँ पुग्दा ११ गते राति ९ बज्याथ्यो होला । त्यही रात ११ बजेतिर काभ्रे सदरमुकाम धुलिखेल लगियो ।
त्यहाँ पुर्याएर के गरियो ?
यसबाट के देखिन्छ भने यो राज्यसत्ता देशभक्त र इमान्दार जनताको होइन । ढाँटछल, दलाली, अपराध, अन्याय र असमाजिक तत्वहरुको हित गर्ने सरकार हो र सत्ता हो । शासकको बुद्धि र षडयन्त्र देख्दा देशमा शान्ति होइन कि निकट समयमै भीषण राजनीतिक द्वन्द्व हुन्छ । यो कुरा निकै गम्भीरतासाथ बुझ्नु जरुरी छ । अन्ततः हामी काभ्रेको त्यो अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्दोष ठहर भई भदौ १८ गते भयौं । तर रिहालगत्तै सर्वोच्च गेटबाटै पुनः गिरफ्तार गरियो ।
हो, हामीलाई काभ्रेमा लगाइएको ‘संगठित अपराध’ पुष्टी नभएपछि गैरकानूनी रुपमा थुनमा राखेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न भदौ १८ मा आदेश दियो । तर स्वतन्त्र न्यायालयको आदेश कुल्चेर केपी–प्रचण्डको फासीवादी सरकारले प्रहरी लगाएर सर्वोच्च गेटबाटै पुनः गिरफ्तार गरी नुवाकोट पुर्याएर अर्को आगजनीको मुद्दा लगायो । त्यो अभियोग आधारहीन र वस्तुनिष्ठा नदेखिएको ठहरसहित रिहा तत्काल रिहा भदौ २६ गते अर्को आदेश भयो । त्यसपछि पनि दलाल पुँजीवादीहरुको कठपुतली सरकारले फेरि गिरफ्तार गरी दाङ पुर्यायो । त्यहाँ ‘बम विष्फोट’ मात्र नभई ‘कर्तव्य ज्यान’ जस्तो गम्भीर आरोपमा मुद्दा चलाइयो । त्यो मुद्दा पनि प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै दुवै जनालाई तत्काल थुनामुक्त असोज ५ गते सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दियो । त्योबेला पनि रिहा भयौं तर सर्वोच्च गुटबाहिर कुरेर बसेका सरकारका आदेशपालकहरुले हामीलाई जबर्जस्तरुपमा घेरा हाली पुनः गिरफ्तार गरे र ‘बम विष्फोट’को अर्को अभियोगमा संखुवासभा पुर्याएर गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा राख्ने काम गरियो ।
थुनामुक्त त भइनै राख्या छ । यसमा सरकार राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही भएदिएर पो यो समस्या आएको हो । न्यायालयले त हामीलाई निर्दोष सावित गरिसकेको छ । तैपनि सरकार अदालतको आदेशको उल्लंघन गरिरहन्छ । मानवअधिकार हनन गरिरहन्छ । प्रेसको घाँटी निमोठ्ने र स्वतन्त्र समाचार लेख्न र बोल्नलाई बन्देज लगाइरहन्छ । बलात्कारीलाई संरक्षण दिइरहन्छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई नियन्त्रमा लिई कारवाही गर्नुपर्दैन सरकारले । एकजना बलात्कारीलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्ने सरकारले नेपाली जनताको परिवर्तनको क्रान्तिलाई नियन्त्रण गर्छु भनेर ध्वाँस दिन सुहाउँछ । महिला दिदीबहिनीहरुमाथि एसिड आक्रमणजस्तो गम्भीर अपराध बढ्याबढ्यै छ । यो दलाल सरकार र व्यवस्था कायम रहेसम्म देशमा शान्ति, समृद्धिको कल्पना गर्नु बेकार छ भनेर त हामीले निर्वाचन हुनुपहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेका छौं ।
सरकारको वार्ता आह्वानमा सत्यता र औचित्य दुवै छैन । त्यो कुरा उसलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले नेकपाको नामै किटेर वार्ता गर्न बोलाउन नसकिएको हो । अर्को कुरा अहिलेको वार्ता टोली हेर्दा झारा टार्ने र पछि दमनको तयारी गर्ने भन्ने गन्ध बढी आउँछ । त्यसमा हामीले इमान्दारिता भन्दा ज्यादा षडयन्त्र देखिरहेका छौं ।